ikhaya / iinkonzo/ Ukuzibonakalisa
Oku kuqina bekunjalo isekwe ukunceda ukusindisa abantu amakhaya ekuvekeni. Amaqabane ethu onke ajolise kukhuseleko lwembonakalo nokuba yeyaseNew Jersey okanye eNew York. Siyayiqonda eyona nto iphambili ekusombululeni isibonakaliso sokwenzakaliswa kwangaphambili, ukuguqulwa kwemalimboleko, ukungabinamali okanye ukuthengisa / ukuthengisa ixesha elifutshane. Sisebenza nabantu ukuthenga nokuthengisa izindlu nomhlaba. Singakwazi ukuchaza iieances zomthetho kunye nendlela nganye yezi nkqubo enxibelelana ngayo. Ukuthetha negqwetha namhlanje malunga nokukhetho lwakho kunokuthatha ubunzima bokukhathazeka esifubeni sakho.